Vaovao - Fahalalana fototra momba ny fitondrana bearings
Fantatrao ve ireo bearings amin'ny faritra mekanika? Izy ireo dia antsoina hoe "sakafo avy amin'ny indostrian'ny mekanika" ary be mpampiasa amin'ny ampahany lehibe amin'ny milina. Satria miasa amin'ny toerana tsy hita ireo faritra lehibe ireo, matetika dia tsy takatry ny tsy matihanina izy ireo. Betsaka ireo matihanina tsy mekanika no tsy mahalala hoe inona no tadiavina.
Inona no atao hoe?
Ny orientation dia ampahany manampy amin'ny fihodinan'ny zavatra iray, fantatra amin'ny teny japoney hoe jikuke.
Ny milina mampiasa bearings dia misy fiara, fiaramanidina, milina mpamokatra herinaratra sns sns.
Amin'ireto milina ireto, ny bearings dia manohana ny "hazo" misy kodiarana, kodiarana, turbine, rotors ary faritra hafa hanampy azy hihodina tsara.
Vokatry ny milina isan-karazany hampiasa "hazo" mihodina be, dia toy izany no nahatonga ny fiantsenana ho ampahany tena ilaina, fantatra amin'ny anarana hoe "sakafo ho an'ny indostrian'ny milina." Toa tsy zava-dehibe io fizarana io, saingy zava-dehibe izany. Raha tsy misy izany dia afaka ' m miaina fiainana ara-dalàna.
Ahenao ny fikorontanana ary ataovy azo antoka kokoa ny fihodinana
Tsy maintsy misy ny fifanolanana eo amin'ny "hazo" mihodina sy ilay mpikambana mpanohana mihodina. Ny bearings dia ampiasaina eo anelanelan'ny "hazo" mihodina sy ny ampahany manohana.
Ny bearings dia afaka mampihena ny fifandirana, mampiorina tsara kokoa ny fihodinana ary mampihena ny fihinanana angovo. Ity no fiasa lehibe indrindra amin'ny fiterahana.
Arovy ireo faritra tohana mihodina ary tazomy amin'ny toerana mety ny "axis" mihodina
Misy hery lehibe eo anelanelan'ny "hazo" mihodina sy ny ampahany manohana. Ny fiakarana dia manakana ny mpikambana mpanohana mihodina tsy ho simban'ity hery ity ary mitazona ny "hazo" mihodina amin'ny toerana marina.
Izy io dia noho ireo fiasan'ny fiantsenana ireo izay ahafahantsika mampiasa indray ity milina ity mandritra ny fotoana maharitra.